VAVOLOMBELON'NY TOMPO NY FANAHY MASINA | FJKM Amboniloha
VAVOLOMBELON’NY TOMPO NY FANAHY MASINA
“Fa isika tsy nandray ny fanahin’izao tontolo izao, fa ny Fanahy avy amin’Andriamanitra, mba ho fantantsika izay zavatra nomen’Andriamanitra antsika.” (1Kor.2, 12)
Miarahaba anao amin’ny anaran’I Jesoa nahazo ilay fanomezana sarobidy avy amin’Andriamanitra, dia ny Fanahy Masina. Manantena tokoa ny Tompo fa havelanao hiasa ao anatinao Izy hahatanteraka ny famonjena anao amin’ny alalan’ny fiasan’ny Fanahy Masina. Eny, tsy ho anao ihany fa ho an’ny hafa koa izay hijoroanao ho vavolombelon’ny fitiavany sy ny famonjena vitany ho an’ny olombelona rehetra.
Izao anefa, aoka ho malina ianao ka hamantatra tsara ary hahay hanavaka ny vokatry ny fanahy eo aminao na eo amin’izay milaza fa manana ary iasan’ny Fanahy Masina. Vavolombelon’ny Tompo ny Fanahy Masina. Ny vokatry ny Fanahy no asehony (Gal. 5, 22-24) fa tsy ny asan’ny nofo izay vokatry ny “fanahin’izao tontolo izao” (Gal.5, 16-18).
Mahereza ry mpamaky malala, Ny Fanahy Masina izay nomen’ny Tomponao, angataho mandrakariva hiasa ao anatinao, fantaro ny asany izay mitari-dalana anao hatrany amin’ny marina rehetra sy mampianatra anao ny zavatra rehetra hahafahanao mijoro ho vavolombelon’Ilay efa nanolotra ny Ainy ho fanavotana anao. MAHEREZA, ENY, MAHEREZA! HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 14 juin 2017